Inona no hatao raha tsy manome lanja anao ny mpiara-miasa | Bezzia
Inona no hatao raha tsy manome lanja anao ny mpiara-miasa
Maria Jose Roldan | 27/04/2021 22:30 | fifandraisana
Iray amin'ireo olana mahazatra sy mahazatra indrindra ao amin'ny mpivady, Izy io dia ny tsy fahatsapana ho sarobidy mihitsy amin'ilay olona tianao. Ara-dalàna izany ary na dia mety mahatsapa fahasambarana amin'ny lafiny maro amin'ny fiainany aza ny olona ambaniansy tena, ny tsy fankasitrahana avy amin'ny mpiara-miasa aminy no mahatonga ny fahasambarana toy izany tsy feno.
Amin'ity lahatsoratra manaraka ity dia asehonay anao ny sasany amin'ireo antony mahatonga ny olona iray tsy hahatsapa ho sarobidy amin'ny sakaizany sy inona no hatao amin'izany.
1 Antony tsy manome lanja ny mpiara-miasa
2 Ahoana ny fomba fihetsika raha tsy manome lanja anao ny namanao
3 Mitadiava fanampiana avy amin'ny matihanina
Antony tsy manome lanja ny mpiara-miasa
Misy antony maromaro na antony mahatonga ny olona iray hahatsapa ho ambanin-javatra ny mpiara-miasa aminy:
Tsy ampy ny fahatokiana sy fanajana
Ny lolom-po eo amin'izy roa dia mitohy ary mazava ny tolona
Sarotra ho azy ireo ny miala tsiny noho ny hadisoana natao ary avonavona aloha
Misy ny tsy fahampian'ny fifandraisana misy fiatraikany ratsy amin'ny mpivady izany
Tsy dia misy mariky ny fitiavana sy ny fitiavana mandritra ny tontolo andro
Raha jerena izany dia ara-dalàna raha tsy mandeha tsara mihitsy ny fiarahana ary tsy omena lanja ilay olona iray hafa. Rava tsikelikely ny mpivady ary tsy misy fotoana hanomezana lanja ny mpivady.
Ahoana ny fomba fihetsika raha tsy manome lanja anao ny namanao
Raha tsikaritranao fa tsy dia manome lanja ny zavatra ataonao isan'andro ny vadinao, zava-dehibe ny mipetraka ary misaintsaina ny toe-piainan'ny fiarahana. Manomboka eto dia tsara ny fanarahanao ireto toro lalana na torohevitra manaraka ireto:
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mieritreritra ny momba ny tenanao manokana sy atombohy amin'ny fahalalana raha mahay manombana ny tenanao ianao.
Zava-dehibe ny manomboka mieritreritra ny momba anao ary manam-potoana hanaovana izay tianao. Tsy mila miaina 24 ora isan'andro akaikin'ny sakaizanao ianao.
Tsy tsara ny mitelina ny zavatra rehetra fa tsy milaza amin'olona. Zava-dehibe ny fahafahana mamoaka fihetseham-po sy fahatsapana samihafa.
Ilaina ny fifampiresahana amin'ny vadinao Ary raha misy mahatsapa zavatra tsy mety aminao dia tokony horesahinao am-pilaminana amin'ny mpikambana ao amin'ilay mpivady.
Raha ny fahatsapana fa ambanin-javatra kely amin'ny mpivady amin'ny fotoana rehetra dia fotoana tokony handraisana fanapahan-kevitra ary manombatombana raha tena ilaina tokoa ny manohy ny fifandraisana.
Mitadiava fanampiana avy amin'ny matihanina
Alohan'ny handraisana ny dingana mety ho lasa famaritana dia tsara ny manatona matihanina mahay mahalala ny famahana ny olana toy izany. Ny mpitsabo dia tsy maintsy mamakafaka amin'ny antsipiriany ny toe-javatra ary avy eto, manoro hevitra ilay olona izay tsy mahatsapa ho sarobidy amin'ny fomba tsara indrindra. Mety hitranga fa misy poizina ny fifandraisana ary tsy mendrika ny hanohy azy. Ny zava-dehibe dia sambatra ilay olona ary tsy misy ilana azy ny manohy miaraka amin'ny mpivady raha tsy tonga izany fahasambarana izany. Zava-dehibe ny mahatadidy fa tsy misy olona mila mifamatotra amin'ny olon-kafa mba hahasambatra. Ny fahasambarana marina sy ny fiadanam-po dia hitoetra ao aminy, tsy mila manana vady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » fifandraisana » Inona no hatao raha tsy manome lanja anao ny mpiara-miasa
Làlan'ny tranoben'ny Loire any Frantsa
Tombontsoa sy toetran'ny faka konjac